Kani waa xerada cusub ee Apple oo si gaar ah looga arkey gudaha | Wararka IPhone
Muuqaal gaar ah oo ku saabsan xerada cusub ee Apple
Waxaan ka hadlaynay sanado ku saabsan waxa noqon doona xerada cusub ee Apple muddo aad u gaaban, bilooyin aan ku daawanayno fiidiyowyo kala duwan oo ka soo baxay 'aragtida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn' halkaas oo aan ka eegi karno horumarka ugu dambeeyay bil bil ka bil. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo hadda ma jiro qof galay gudaha dhismaha oo, oo uu hagayo Jony Ive, ayaa ogaaday qaar ka mid ah sirta ka dambeysa shirkadda abuurista ugu caansan sanadihii la soo dhaafay.
Warbixin gaar ah oo lagu daabacay shalay in banki (Ingiriis ahaan), qaar ka mid ah astaamihii hore ee qarsoonaa ee loogu yeeri jiray Apple Park iyo macluumaad kale oo aad u xiiso badan oo lagu daray ayaa shaaca laga qaaday oo u adeegaya in la fahmo wax kasta oo ka dambeeya dhismahan qaab muuqaal ah.
1 Wax walba oo faahfaahsan
2 Riyadii shaqadu way rumowday
Wax walba oo faahfaahsan
Tani waa su'aasha su'aasha ah ee Steven Levy - weriye wired - weydiiyo Ive markii uu u sheego in makhaayaddu leedahay awood u leh 4.000 oo qof iyo albaabbada muraayadaha ee cabirka afarta dabaq ee dhismaha, kaas oo la furi karo markii waqtigu oggol yahay in lagu raaxeysto khibrad wanaagsan oo ka jirta meeshan.
"Tani waxay noqon kartaa su'aal doqonimo ah," ayuu yidhi Levy, "laakiin maxey muhiim ugu yihiin afarta dabaq ee dhaadheer?"
Midda Ive, kor u qaadidda suni, waxay ku jawaabaysaa: «Waa hagaag, waxay kuxirantahay waxaad u jeeddo u baahan tahay, maya?
Laga soo bilaabo dhismaha laftiisa ilaa walx kasta oo sameeya, waxay umuuqataa inay leedahay sabab iyada lafteeda lafteeda ah, oo loogu talagalay xaalado gaar ah had iyo jeerna diiradda la saaro ka dhig nolol maalmeedka shaqaalaha 12.000 ee laga filayo inay ka shaqeeyaan xerada si ka wanaagsan. Nidaamka shaqada, tusaale ahaan, oo loo qaybiyay qollo yar yar, waxaa ku jira miisas si toos ah loo kicin karo ama loo dhigi karo iyadoo kuxiran haddii aad dooneysid inaad istaagtid ama fadhidid. Tusaale kale: Apple waxay rukhsad u samaysay raashin u gaar ah oo loo yaqaan 'pizza rack' si shaqaaluhu ay badeecada uga qaadan karaan maqaaxida una geyn karaan goobta shaqada iyada oo aan waxyeello lagu gaadhin jidka.
Ku mashquulsanaanta haysashada gabi ahaanba wax walba oo ku saabsan shirkadda gacanta ku haysa, ha ahaato badeecadaha iyo hawlgallada, waa wax dhib ku ah Shaqooyinka bilowgii. Maanta, waa mid ka mid ah sababaha Apple loogu meeleeyay 'wax ka badan' shirkadda tiknoolajiyadda sida Google ama Samsung.
Riyadii shaqadu way rumowday
Xaruntan cusub waxay ahayd mashruucii ugu dambeeyay ee weynaa ee Jobs saadaaliyay oo aan arki doonno sida runta ah, runti. Qeyb wanaagsan oo ka mid ah dadaalladiisii ​​ugu dambeeyay, sida Levy wax u aruuriso, ayaa loogu talagalay in laga fekero gabalkan dhismaha ee maanta, in ka badan 5 sano dhimashadiisa ka dib, ay u taagan tahay xaqiiqo. Laga soo bilaabo nooca marmar ee ahayd in la isticmaalo, xataa sida qoryaha loo jaro, iyo sidoo kale noocyada geedaha ee ay ahayd in la beero - in ka badan 9.000 wadar ahaan - dusha iyo hareeraha dushiisa, dhammaantood waxay ku jireen madaxiisa.
Waxaa jira waxyaabo badan oo tan ka mid ah oo xusuusinaya 'jacaylka' Apple, oo ka fog tirooyinka waaweyn iyo dakhliyada waaweyn ee maanta (la'aanteed dhismaha xerada ayaan suurtagal ahayn, malaha). Markii la weydiiyay dadaal titanic si loo cabbiro faahfaahin kasta oo xerada Marka la eego shuruudaha saxda ah, tixgelinta naqshadeynta oo ah gabal aasaasi ah si loo abuuro isafgarad dhismuhu u muuqdo inuu shucaacayo, kan ayaa ka jawaabaya:
Kama cabbireyno [kambaska] dad tiro ah. Waxaan ka fikirnaa iyaga mustaqbalka. Ujeeddadu waxay ahayd in la abuuro khibrad iyo jawi ka tarjumaya cidda aan nahay shirkad ahaan. Halkani waa gurigeennii, wax kasta oo aan qaban doonana mustaqbalka ayaa ka bilaabanaya halkan.
Maqaalku waa mid loo baahan yahay in loo akhriyo qof kasta oo raba inuu helo fikrad qoto dheer oo ku saabsan waxa guriga Apple noqon doono tobanka sano ee soo socda, maadaama ay tahay tii ugu horreysay nooceeda ah ee xaqiijisa wararka xanta ah ee laga maqlay mar uun iyada oo loo marayo kalsooni caddayn iyo in la bixiyo aragtida guud ee gacanta adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Muuqaal gaar ah oo ku saabsan xerada cusub ee Apple
Apple Pay waxaa hadda laga heli karaa Talyaaniga
Soo dejiso macruufka cusub ee iOS 10.3.3 oo u gaar ah iPad Pro